vCita: Oge akara aka, ịkwụ ụgwọ, yana ụzọ ịkpọtụrụ maka obere saịtị azụmahịa | Martech Zone
vCita: Oge akara aka, ịkwụ ụgwọ, yana ụzọ ịkpọtụrụ maka obere saịtị azụmahịa
Tọzdee, Ọktoba 9, 2014 Tọzdee, Ọktoba 9, 2014 Douglas Karr
LiveSite site vCita na-ewe nsogbu niile nke ịhọpụta ọnọdụ, ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị, njikwa kọntaktị na ọbụlagodi ederede ma tinye ya na mmịfe mara mma na weebụsaịtị gị.
Atụmatụ dị mkpa nke LiveSite site vCita
Njikwa kọntaktị - Wegide ozi ndị ahịa ma dozie mkparịta ụka ha na ndị otu gị. Nchịkọta weebụ na-enye gị ohere ijikwa kọntaktị, nweta nghọta, soro mmekọrịta ndị ahịa, zaghachi ma soro site na iji ngwaọrụ ọ bụla. Nwere ike imezi nkwukọrịta onye ahịa, ọkwa na ncheta.
Mepụta Fordị - Anakọta ndu na onye ahịa site na ọnụ ụzọ ahụ n'ụzọ dị mfe na onye na-ewu akwụkwọ n'ịntanetị.
Usoro Onlinentanetị - Hapụ ndị ahịa ka hatọ ma tugharia oge a na-eme oge ọ bụla, site na ngwaọrụ ọ bụla. Nwere ike ịnye ndepụta ntanetị nke ọrụ, ụgwọ na usoro ịhazi usoro. Nkwenye na ncheta akpaaka ga-enyere aka n'ibelata ihe ngosi ọ bụla. Ọbụna ọ na-emekọrịta kalenda ahụ na kalenda gị dị na Outlook, Google, ma ọ bụ iCal.
Nkwụ ụgwọ Inntanetị na Akwụkwọ ọnụahịa - Nye ndị ahịa dị mma nhọrọ ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ, ihe ncheta akpaaka, na akwụkwọ ọnụahịa omenala. Nwere ike ịtọ ego, ụtụ isi ma nye mwepu ego.
Akwụkwọ ringkekọrịta - Na nzuzo ziga ma nata faịlụ na ndị ahịa na ntanetị weebụ na ngwaọrụ ọ bụla.
LiveSite site vCita nwekwara WordPress ngwa mgbakwunye iji mee ka ọ dị naanị itinye edemede ha na saịtị WordPress gị! Gbalịa ya n'efu na saịtị gị site na iji njikọ njikọ anyị na post a.
Tags: nhazi ogenjikwa kọntaktịakwụkwọ nkekọrịtaụdị onye na-ewu ụlọakwụkwọ ọnụahịaakwụkwọ ọnụahịa n'ịntanetịịkwụ ụgwọ n'ịntanetịnhazi oge n'ịntanetịgbapụtavcitawijetị wijetị